Mudane Xassan Sheekh Maxamuud. - SomaliNet Forums
Postby xaliye123 » Sun May 19, 2013 6:01 pm
Ayaandarada haysata madaxweynaha DFS waa ayaandaradii qabsatay Caydii.
Niman hawiye dantiisa wada buu wax ka dhagaysanayaa isogoo donaya inuu somaliya oo dhaba madax u noqdo.
Ilaa uu gacan bira ku qabto munafiqiinta ku hoos jirtana wax alaale iyo wax u hagaagaya ma jirayso.
iyo qaarkaloo badan ilaa uu iska qabto walaahi inuuna waligiis somaliya oo dhan madax u noqonayn.
Re: Mudane Xassan Sheekh Maxamuud.
Postby Minneapolis Mayor » Sun May 19, 2013 6:17 pm
Yaa kuyiri Odayaasha Hawiye ayuu dhagaystaah? Niicda Majeerteenka iyo Ogaadeenka meesha kale tag. Xassan sheikh wuxuu latashadaah Wasiiradiisa, iyo PM kiisa.
Xassan Sheikh is a Professor in Political Science and would never ask Xaad or Axmad Diiriye for advice on how to manage the country.
Postby xaliye123 » Sun May 19, 2013 6:29 pm
Wax la qarin karo iyo waxaan la qari karin baa kala jira, marka waxa ka socda Muqdisho waa wax aan la qarin kari.
1. Baraalamaanki somaliyeed oo isbaaro loo dhigto hadh cad.
2. Mooshinkii Baarlamaanku ay damacsanaaye oo lagu celiyaya isagoonba laga wada hadlin(ankara)
3. Jubaland oo hawiye ku lid´ah oo uu la saftay tolkiisa e uuna u fiirin danta Somaliyeed.
4. Odayada oo ka dhaadhiciyaya Daarodka waxaad iskaga celinkartaa inaad Khaatumo iyo Maakhir mid walba Somaliland u ogolaato.
5. Kenya oo uuna odhankarin inaga baxa lakin uu usoo maro Xaad&Iidiye.
Postby Minneapolis Mayor » Sun May 19, 2013 6:42 pm
Sxb Darood ayaga ayaa dawlada utaliyo. Axmad Madoobe keligiis darood maaha. Madaxweynaha Soomaaliya oo dhan ayuu madaxweyne u yahay. Inta Askar Kenyati ah qabil keensado hadii ay ugoodiyaan qabiilada hawiyaha, Dawlada xaq ayay ugu leeyihiin in ay difaacaan.
Mooshinka baarlamaanka madaxweynuhu ma hortaago. 22 May ayaa lakeenayaah for debate.
Postby xaliye123 » Sun May 19, 2013 6:50 pm
Sxb aniga yaad ii malaysay markaa iigu shekaynayso Daarod baa dawlada u taliya ma Saacid baad ii malaynaysaa.
Xassan Sheekh Maxamuud qalad buu galay walina wuu isa sixi karaa lakin inta ay ku hoos jiraan nimanka aan kuu shegay waxba ma soconayaan.
Somalida muqdisho ku nool sow maydaan yugaandha, burundhi iyo sangudhuudhi oo dhan usoo kaxaysan inaad ku maamushaan ma cid baa ka hadlaysa, waa maya.
Maxaa kenya oo al-shabaab la dagaalamaysa aad ugu mashqulaysaan iyadoo aad ogtahay inayna baxay ilaa umada jubalaand ay go´aansato mooye.
by Sadaam_Mariixmaan » Sun Sep 30, 2007 5:38 pm » in General - General Discussions